ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့် (330784-47-9) hplc≥98% | AASraw လိင်အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင် / အထီးအသုံးပြုခြင်း / Avanafil အမှုန့်
4.00 ထဲက 5	အခြေခံ3ဖောက်သည် ratings
SKU: 330784-47-9. Categories: အထီးအသုံးပြုခြင်း, ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Avanafil မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (330784-47-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Avanafil အမှုန့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းလိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကသွေးစီးဆင်းမှုတစ်ခုစိုက်ထူစေနိုင်ပါတယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ avanafil ၏အားသာချက်ကအခြားလိင်တိုးမြှင့်ဟော်မုန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လုပ်ဆောင်ချက်ကအလွန်အစာရှောင်ခြင်းစတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်း 30-45 မိနစ်အများဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုသို့ရောက်ရှိအလျင်အမြန်စုပ်ယူသည်။
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Avanafil အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 150-152 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်သံသရာ
ဓာတုအမည်များ: Raw Avanafil အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Erectile အလုပ်မဖြစ်များအတွက် Avanafil အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လက်နက်တိုက်မှနောက်ဆုံးထို့အပြင်သောကွောငျ့, ကျနော်တို့ကတခြား ED မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လုပျမတိုင်မီရဲ့ကတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူကြကုန်အံ့။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုယူတဲ့သူယေဘုယျ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား၏ခြုံငုံ 77% ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူသောလူတို့၏ 54% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာစိုက်ထူအောင်မြင်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူတို့တွင်, 63% ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူတဲ့သူ 42% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရော Avanafil အမှုန့်ယူပြီးနောက်မှာစိုက်ထူအောင်မြင်။
အထူးသဖြင့်တဦးတည်း 12-ရက်သတ္တပတ်အဆင့် III ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏ရလဒ်များကိုကိုကြည့်ကြရအောင်။ 646 ယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်မတိုင်မီ Avanafil အမှုန့် 50 မိနစ် 100, 200, ဒါမှမဟုတ် 30 မီလီဂရမ်ဖြစ်စေယူတာဝန်ကျတယ်။ အစားအစာသို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲခြင်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကာလအတွင်းရာ၌ 300 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးစားမှု၏% 64 မှ 71% ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူသောသူသည်လူတို့တွင် 27% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရော Avanafil အမှုန့်ကိုယူတဲ့သူလူတို့တွင်အောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်။ အခွားသောကောင်းသောသတင်း: 59% ကို 83 ၏% 80 မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာကြိုးစားနေကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုယူပြီးပြီးနောက်6နာရီထက်ပိုလုပ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူသောသူသည်အမျိုးသားများတွင်သာ 25% အောင်မြင်သောကြိုးစားမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်။ တချို့ယောက်ျားအတွက်, Avanafil အမှုန့် 15 မိနစ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (တိန်း 2012)
တကယ်တော့, အခြားလေး ED မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုခွဲခြားစေခြင်းငှါတဦးတည်းအရာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်အစာရှောင်ခြင်း 15 အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြသကဲ့သို့ဒေါက်တာဝိန်း Hellstrom, နယူး Orleans တွင်ဆေးပညာ Tulane တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာအ urology ၏ပါမောက္ခ, "အလားအလာလေးပါး၏အလျင်မြန်ဆုံးသရုပ်ဆောင်က" ရော် Avanafil အမှုန့်တစ်ဦးက Reuters သို့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထား မိနစ်များ။ သို့သျောလညျးအဖြစ်ကောင်းစွာအကြောင်းကို 15 မိနစ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် Cialis အမှုန့်များ၏အစီရင်ခံစာများရှိခဲ့ပါပြီ။
Avanafil အမှုန့်နှုတ်ဖြင့်ယူမယ့်တက်ဘလက်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 100- မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် 200-မီလီဂရမ်ဆေးများကိုယူပြီးယောက်ျားအဘို့, ရော် Avanafil အမှုန့်များသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်မပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Activite မတိုင်မီလိုအပ်ခန့် 15 မိနစ်အဖြစ်အစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ,.
လိုအပ်အဖြစ် 50-mg ကိုထိုးတာယောက်ျားအဘို့, ရော် Avanafil အမှုန့်များသောအားဖြင့်အကြောင်းကို 30 မိနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီ, အစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပိုပြီးမကြာခဏတစ်ချိန်က 24 နာရီအတွင်းထက်ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုယူမထားပါနဲ့။
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့် (PDE) inhibitors.It erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (:; ယောက်ျားတစ်ဦးစိုက်ထူ get သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းခွန်အားမရှိခြင်း ED) ကုသရန်အသုံးပြုသည် phosphodiesterase ဟုခေါ်တွင်ဆေးဝါးများ၏အဆင့်အတန်း၌တည်ရှိ၏။ ဤသည်အထီးတိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ပုံမှန်လမ်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေး၏စောင်ရေကူညီပေးသည်ရာသည်၎င်း၏အဓိကတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းကနေ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ထိရောက်စေသည်ဒါပေမယ့်အများကြီးသက်ရောက်မှုနှင့်၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းပူဇော်ဖို့ရှိတယ်လို့သက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။
ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းလိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကသွေးစီးဆင်းမှုတစ်ခုစိုက်ထူစေနိုင်ပါတယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်မထားဘူး။ ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) အဖြစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများပြန့်ပွားတားဆီးမထားဘူး။
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုလည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အဖြစ်လူသိများခွန်အားမရှိခြင်း (က penile စိုက်ထူမှီသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း), ကုသအသုံးပြုသည်တစ်ခုပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ tadalafil (Cialis အမှုန့်), sildenafil (Viagra) နှင့် vardenafil (Levitra) ပါဝင်သော phosphodiesterase inhibitors ကိုခေါ်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တံ၏စိုက်ထူအသွေးနှင့်လိင်တံ၏အဆာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆာအရွယ်အစားလိင်တံတိုးသွေးဆောင်ကြဉ်းနှင့်လိင်တံဖို့ပိုအသှေးကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောသွေးကြောဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, အရွယ်အစားကွာလိင်တံကျဆင်းခြင်းကနေအသွေးကို ယူ. သောသွေးကြောနှင့်လိင်တံကနေလျော့နည်းသောအသွေးကိုဖယ်ရှား ။ တစ်ခုစိုက်ထူရန်ဦးဆောင်သည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွလိင်တံထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်သိသိ guanosine monophosphate (cGMP) ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ခုအင်ဇိုင်း, guanylate cyclase ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျော့ကျလာလိင်တံနှင့်ထံမှအသှေးကိုတင်ဆောင်သွေးကြောများ၏အရွယ်အစား, အသီးသီးနှင့်တစ်ခုစိုက်ထူစေဘို့အဓိကတာဝနျရှိကြောင်း cGMP ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ cGMP အခြားအင်ဇိုင်း, phosphodiesterase-5 အားဖြင့်ပျက်စီးသောအခါ, သွေးကြောသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အရွယ်အစားပြန်လာ, သွေးလိင်တံအရွက်ကို၎င်း, စိုက်ထူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့် cGMP ဝန်းကျင်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်အောင် cGMP ဖျက်ဆီးထံမှ phosphodiesterase-5 ကာကွယ်ပေးသည်။ cGMP များ၏ဇွဲအသွေးနှင့်လိင်တံ၏တစ်ဦးထက်ပိုကြာရှည် engorgement စေပါတယ်။ ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ကိုဧပြီလ 2012 အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
•အရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု: အရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုထိုး-related ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါစေ။ ရောဂါကို Retinitis pigmentosa နှင့်အတူလူနာအတွက်သတိထားသုံးပါ, လူနည်းစုလွှာ phosphodiesterases (ရရှိနိုင်မပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်) ၏မျိုးဗီဇချို့ယွင်းရှိသည်။
အရှုံးအကြားအာရုံ•: ကြားနာ၏ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အရှုံးခဲအစီရင်ခံထားတော်မူပြီ ကြားနာအပြောင်းအလဲများကို tinnitus နှင့်မူးဝြေခင်းအားဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။ ကုထုံးနှင့်အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းအကြားတစ်ဦးကတိုက်ရိုက်ကြားဆက်ဆံရေးစိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
• Hypotension: သွေးပေါင်ချိန်အတွက် Decrease ကြောင့် vasodilator သက်ရောက်မှုမှပေါ်ပေါက်မည် လက်ဝဲ ventricular ထွက်သွားအဆီးအတား (aortic stenosis သို့မဟုတ် hypertrophic ပိတ်ဆို့ခြင်း Cardiomyopathy ကို) နဲ့လူနာသတိနဲ့သုံးတတ်၏ hypotensive လုပ်ရပ်များပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ alpha-adrenergic ရန်ကုထုံးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုမှုလက်ခဏာ hypotension ဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း, လူနာကြိုတင်နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှထိုးမှာကုထုံးစတင်မှ hemodynamically တည်ငြိမ်ဖြစ်သင့်သည်။ လူနာကဒီအဖြစ်တစ်ပြိုင်တည်းပါသိသိသာသာအီသနောစားသုံးမှုလက်ခဏာ hypotension ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေခြင်းငှါရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်သငျ့သညျ။
• Priapism: ကြာချိန်အတွက်နာကျင်မှုစိုက်ထူ>6နာရီ (ခဲ) သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ထူ>4နာရီဆက်ရှိနေသေးလျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာလူနာတို့ကိုသွန်သင်။ priapism (တံစဉ်ကိုဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ, မျိုးစုံ myeloma, သွေးကင်ဆာ) မှသူတို့ကို predispose ရသောအခြေအနေများရှိသည်သောလူနာများအတွက်သတိနဲ့သုံးပါ။
Avanafil ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်စျေးကွက်
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤအလက္ခဏာတွေမဆိုပြင်းထန်နေကြသည်သို့မဟုတ်မသှားလြှငျအသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ:
တချို့ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးနက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပဌနာသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုရရှိရန်:
ကြာကြာ4နာရီထက်ကြာသောစိုက်ထူ
ကုန်ကြမ်း Avanafil အမှုန့်သည်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြဿနာများရှိပါကဒီဆေးကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
AASraw ထံမှ Avanafil အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
AASraw ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်မယ့်လိင်အဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Avanafil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုထောက်ပံ့ပေး ..
Avanafil ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
Avanafil အမှုန့် VS Vardenafil HCL အမှုန့်: အမှုန့် enchancing လိင်